प्रहरी कमजोर बनाएर कोही पनि नागरिक बलियो हुँदैन : सर्वेन्द्र खनाल (अन्तर्वार्ता)
२१ आश्विन २०७५, आईतवार १८:०५
सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक भएको ६ महिना भएको छ । यो अवधिमा उनले सांगठनिक सुधार तथा शान्ति–सुरक्षाका पक्षमा केही महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । प्रहरीभित्र लामो समयदेखि रोकिएका बढुवाहरू अघि बढाएका खनालले केन्द्रमा ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल ब्युरो तथा साइबर कन्ट्रोल ब्युरो स्थापना गरेका छन् । यसबीच विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न एवं विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्नमाथि पनि प्रहरीले तीब्रताका साथ कारबाही चलाइरहेको छ ।
यद्यपि केही समययता समाजमा घटेका सामाजिक अपराधका कतिपय घटनामा प्रहरी संलग्नता र छानबिनलाई लिएर चर्को आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । देशमा बढ्दो बलात्कार, प्रहरीमाथि उठेका प्रश्न, अनुसन्धान आदि विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको विषयलाई लिएर प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । परिस्थिति काबु बाहिर गएको हो ?
शान्ति–सुरक्षाको स्थिति हामीले मूल्यांकन गर्दा र सरसर्ती हेर्दा दुवै पक्षमा राम्रो छ । कुनै पनि डिसअर्डर ल्याउने अथवा गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नेहरू नियन्त्रणमा छन् । विगतमा जस्तो विस्फोटन, आगलागी, तोडफोड, हत्या आदिको अवस्था अहिले छैन । मैले टेकअप गर्दासम्म पनि एक्सटर्सन र धम्कीका धेरै कुरा थिए । त्यसलाई हामीले धेरै कम गरेका छौं । सँगसँगै आपराधिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा पनि केही घटनाबाहेक हामीले ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौं, पक्राउ गरेका छौं र तत्कालै पक्राउ गरिएका घटना पनि प्रशस्तै छन् ।
कञ्चनपुर लगायतका केही घटनामा प्रहरीमाथि नै औंला उठाइएको छ नि ?
कुनै पनि संगठनमा विभिन्न प्रावधान हुन्छन् । सजाय र पुरस्कारका व्यवस्थाहरू पनि त्यही कारण गरिएका हुन् । कुनै प्रहरीले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने सांगठनिक संयन्त्र छ । कसुरअनुसारको विभागीय कारबाही वा अन्य दण्ड हुन्छ । कुनै एक प्रहरीले गरेको कमजोरीमा समग्र संगठनमाथि नै औंला उठाउनु जायज हुँदैन । कतिपय घटनामा कहिले सांसद संलग्न भएका छन्, कहिले शिक्षक, कहिले पत्रकार संलग्न भएका छन्, कहिले को भएका छन् । एक जना संलग्न भएको आधारमा समग्र वर्ग, पेसा वा क्षेत्रलाई लाञ्छित गर्नु ठीक होइन । त्यसमाथि प्रहरी संगठन अझ संवेदनशील संगठन हो, यो तमाम नागरिक एवं समग्र राष्ट्रको संगठन हो । त्यसकारण यो संगठनभित्र केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, बदमासहरू छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ, तर समग्र संगठन नै यस्तो–उस्तो भन्नु जायज होइन ।
सामाजिक अपराधका घटनाहरू जसरी एकपछि अर्को गरी सतहमा आइरहेका छन्, त्यसले सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको प्रहरीको उपस्थिति तल्लो तहसम्म बलियो भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?
तथ्यांकअनुसार जम्मा २६ प्रतिशत घटना नचिनिएका अथवा पेसेबर अपराधीबाट भएको छ । बाँकी चिनजानका, साथीभाइ, नातागोताका मानिसहरूबाट सामाजिक अपराध भएको छ । घर, कोठा, स्कुल, साथीकहाँ जाँदा, अभिभावकत्वका क्रममा यस्ता घटनाहरू भएका छन् । जसले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ उसैबाट बलात्कृत हुनुपर्छ भने त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति भएन भन्नु कति न्यायसंगत हुन्छ ? २६ प्रतिशत नचिनेका र पेसेबर अपराधीहरूले घटाएका घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी गस्ती, सुराकी, प्रहरीले सूचना संकलन, जासुसी संयन्त्र प्रयोग आदि गर्ने काम होला, समुदायसँग सहकार्य गर्ने विषयहरू होलान्, जसले घरमा सुरक्षित छु भन्छ त्यही असुरक्षित हुन्छ भने प्रहरी कसरी घरघरमा पुग्न सक्छ ? यसमा पनि कहाँ, के कति भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ ।
प्रहरीले नचाहिने नै गरिरहेको छ, कमजोरी नै गरिरहेको छ भने भन्नु पनि पर्छ, तर प्रहरीले अपराधीहरूलाई रातारात, दौडँदा–दौडँदै पनि पक्राउ गरेको छ नि । एक घण्टाभित्र, दुई घण्टाभित्र अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । पोखरामा घटना घटाएर भाग्ने क्रममै आबुखैरेनीबाट पक्राउ गरेको छ । यसरी प्रहरीले रेस्पोन्स गरेका घटना उत्तिकै छन् । प्रहरी नै यस्तो–उस्तो भनेर मनोबल गिराउने खालको धारणाले हामी कसैलाई ठीक गर्छ जस्तो लाग्दैन ।
मिडिया तथा सोसल मिडियामा आइरहेको धारणा मनोबल गिराउने खालको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
यसमा प्रहरीको भूमिका के हो स्पष्ट हुनुपर्छ । एकतर्फी रूपमा प्रहरीले गरेन मात्र भनियो । प्रहरीको घटनामा कस्तो भूमिका हुनुपथ्र्यो, के भएन भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु जरुरी छ । प्रहरीले के सम्म गर्न सक्थ्यो, के गरेन ? जस्तो कञ्चनपुरको घटनामा राति १२ बजे नै प्रहरी जान सक्थ्यो, तर गएन । जिम्मेवारलाई कारवाही पनि भएको छ । के गर्न सक्थ्यो, के गरेन, के–कस्तो लापरवाही गर्‍यो, कति जिम्मेवार भयो भन्ने कुरा मुख्य हो ।
सामाजिक अपराधबाहेक अन्य फौजदारी अपराधमा प्रहरीको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सामाजिकबाहेकका अपराधमा कुन ठाउँमा कस्तो अपराध भएको छ, मलाई देखाइदिनुस् । कुन ठाउँमा लुटपाट भएको छ, कहाँ गुन्डाले धम्काएको छ, कहाँ फिरौती मागेको छ, कुन टोलमा मलाई थर्कायो भन्ने छ, कुन ठाउँमा पैसा मागेर खायो भन्ने छ ? तस्करी तीन तिहाइ नियन्त्रणमा आएको छ, नेपाल प्रहरीले तस्करीमार्फत हुने राजस्व चुहावट रोक्न ५६ दशमलव ३४ प्रतिशत योगदान गरेको छ । साना हतियार नियन्त्रण भएको छ, तराईमा सतहमा आउने डकैतीका घटनाहरू नियन्त्रण छन् । विप्लव समूहले ठाउँ–ठाउँमा विस्फोटनका घटनाहरू गराइरहेको थियो अहिले कहाँ सुन्नुभएको छ ? कसले नियन्त्रण गरेको छ त्यो ? डिसअर्डर ल्याउने खालका केही तत्वले गराएका घटनाका सन्दर्भमा पनि प्रहरीले एकदमै सचेतता र सजगताका साथ काम गरिरहेको छ । परिणाम आउँदैछ, आइरहेको छ । यद्यपि एकजनाले बदमासी गरेको कुरालाई लिएर जसरी प्रहरीमाथि प्रहार गरिँदैछ, त्यो एकदमै चिन्ता र दु:ख लाग्ने कुरा हो ।
कञ्चनपुर घटनामा प्रहरी कहाँनेर चुकेको हो ?
प्रहरीको कमजोरीका विषयमा प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । प्रहरी १२ बजे नै जानुपथ्र्यो, त्यो कुरा भएन । अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा केही प्रमाण संकलन गर्नुपथ्र्यो त्यो कुरा व्यवसायिकता अनुरूप हुन सकेन । यस्ता कुरा नहुनुका पछाडि धेरै ठूलो आशंका पनि छ । ती आशंका मेटाउनुपर्नेछ । गल्ती गरेकोमा, लापरवाही गरेकोमा हामीले निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाएका छौं, उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान भैरहेको छ । कसुरअनुसार विभागीय वा ठूलो कारबाही हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ ।
सत्तारूढ दलकै प्रमुखमध्येका एक नेताले संसदमै शान्ति सुरक्षा र बढ्दा सामाजिक घटनाको विषयलाई लिएर सरकार एवं गृह प्रशासनको आलोचना गर्नुभयो । सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको भन्नुभयो, उहाँले कुरै नबुझी बोल्नुभएको हो ?
कसले के बुझ्यो म त्यता जान्नँ । मैले बुझेको कुरा र मिनी संसद् मानिने दुईवटा संसदीय समितिमा प्रहरीले गरेका कामको प्रशंसा नै भएको छ । त्यहाँ माननीय सांसदज्यूहरूले प्रहरीले गरिरहेको छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि आइदिए हुन्थ्यो । बहुमत सांसदले प्रहरीको प्रशंसा गर्नुभएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नु जायज कुरा हो । प्रहरी संगठनको प्रमुखको हैसियतले म त अपराधको कुनै घटना नै नघटोस् भन्ने चाहन्छु, तर मैले सोच्दैमा त्यस्ता घटना नघट्न सम्भव नहोला । हजुरबुवाले नातिनी बलात्कार गर्ने, नातिले हजुरआमा बलात्कार गर्ने, मामा र काकाले बलात्कार गर्ने घटनाहरू घटिरहेका छन् । यस्ता घटनामा हामी सबैले सजग र सतर्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
संसदीय समितिमा पनि यस्ता कुराहरूमा बहस भयो । यसमा दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सुव्यवस्थाका लागि सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ । सचेतनाका लागि काम गर्नुपर्छ । केही अपराधमा गम्भीर सजाय हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्ला, कहीँ नैतिक शिक्षा जरुरी होला । स्कुल, कलेज, घर, समाज, सबैतिर नैतिक शिक्षा जरुरी छ ।
के सामाजिक घटनाको चरित्र नबुझेर प्रहरीमाथि बढी प्रश्न तेस्र्याइएको हो ?
प्रहरीले सबै कुरा गरिदियोस् भन्न सम्भव छ ? बुझेको कुरा सबैले लेखिदिनुपर्‍यो । प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र जवाफदेही बनाएर हुन्छ ? समग्रमा बुझिएको कुरा मिडियामा पनि आउन जरुरी छ । मेरै कुरा गर्ने हो भने मैले पनि जागिर खाएर राम्रो गर्ने हो, म त्यो प्रयास पनि गर्छु । यद्यपि के लाञ्छना लगाएर मात्र सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ ? हाम्रा इमान्दार प्रयासहरू र हामीसँगै समाजमा गएर गर्ने कामहरूका विषयमा नबोलिदिने ? गरेका राम्रा कामहरू छन् भने ती बाहिर नआउने ? हामी राम्रो गर्नकै लागि रातदिन दत्तचित्त छौं । अपराधका केही घटनामा हामीले बाहिरको कुरा गर्‍यौं, अनुभव र तालिमको कुरा गर्‍यौं भने अर्को आलोचना हुन थाल्छ ।
समृद्ध मुलुकमा पनि घटनाहरू घट्छन्, हामीले त्यो भन्न पाउने कि नपाउने ? त्यसो भन्यो कि यो घटना तैले गरेको भन्ने ? हामी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत प्रहरीले डिफर्म गराइएका देशहरूमा पनि काम गरेर फर्किएका छौं । प्रहरीमाथि आक्रमण भयो भने भोलि देशकै शान्ति–सुरक्षा कमजोर हुन्छ । प्रहरीलाई कमजोर बनाइयो भने अन्य कुराहरू पनि डिसअर्डर हुन्छन् । नेपालमा हामी ९० प्रतिशतभन्दा बढी सफल छौं । एउटा घटनाकै कारण प्रहरी खत्तम भनिहाल्नु कति उपयुक्त हुन्छ ? के प्रहरीको मनोबल खस्काउँदा हामी सबैको भलो हुन्छ ? प्रहरीले कुन साधन–स्रोतले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि त हेर्नुपर्छ ।
नेपाल प्रहरीलाई साधन–स्रोतको समेत अभाव छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेपाल प्रहरी सिमित साधन–स्रोतमा काम गरिरहेको छ । कुन ठाउँमा तेल दिनुभएको छ, कुन ठाउँमा पैसा दिनुभएको छ ? कुन ठाउँमा समात्ने साधन दिनुभएको छ ? कुन ठाउँमा डिभाइसेजहरू छन् ? यति हुँदाहुँदै पनि हामी जवाफदेहिताका साथ अघि बढिरहेका छौं । यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न बाहिर भएका राम्रो अभ्यास कहीं छ भने त्यसलाई हामी आत्मसात गरौं । हामीले पनि यसमा योजना बनाएका छौं, अब हामी त्यो प्लान लन्च गर्छौं । हामी योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्दैछौं । यसमा हामी सबैको सहभागिता जरुरी छ । नेपाल प्रहरीले त गज्जब गरेछ भनेर विश्वभर सन्देश जाओस् । नेपाल प्रहरीले गरेका कामलाई विदेशमा पनि सम्मान गरिएको छ । म न्युयोर्कमा रहँदा दक्षिण सुडान टुक्रिएको थियो, त्यतिबेला म संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत शान्ति मिसनमा सहभागी थिएँ । त्यहाँ आपराधिक घटना र शान्ति–सुरक्षा नभएपछि नै देश टुक्रिएको हो ।
यति अब्बल प्रहरीमाथि किन यति धेरै प्रश्न त ?
प्रहरीमाथि खेलबाड गर्ने तत्वहरू पनि हुन्छन् । तस्करहरूले गर्छन्, कालोबजारी गर्नेहरूले गर्छन् । संगठित अपराध गर्नेहरूले गर्छन्, यिनीहरू प्रहरीलाई कमजोर र आफ्नो नेक्सस बलियो बनाउन खोज्छन् । राजनीतिसँग जोडिएर समेत प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुन्छ । त्यसमाथि अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा उनीहरू गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गरेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन खोज्छन् ।
देशमा विखण्डनको अभियान चलाउनेहरूलाई छुट दिइएको कुरा उठिरहेको छ ? प्रहरीले कसरी हेरिरहेको छ ?
प्रहरीले छुट दिँदैन । केही राजनीतिक मुद्दालाई हेर्ने सरकारको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ । यसैमा सबै पर्छन् भन्ने पनि होइन । यद्यपि कस्तो अवस्थामा प्रहरी कारबाही गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने कुरामा प्रहरीले गम्भीरता र सजगताका साथ नियालिरहेको छ । हालसालैका केही घटनाक्रममा केही मानिस पक्राउ परेका छन्, समस्या नआओस् भनेर केही ठाउँमा प्रहरीले सजगताका साथ काम गरिरहेको छ । विप्लव र प्रकाण्डसम्मका घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने नियन्त्रण गरेकै छ । वार्तामा आउने वातावरण निर्माणमा प्रयास भैरहेको छ । शान्ति–सुरक्षामा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । केही कुरामा गम्भीर भएर सजगताका साथ चल्नुपर्नेछ । त्यसको अर्थ प्रहरी मुकदर्शक भएर बसेको भन्ने होइन ।
प्रहरी नै भ्रष्टाचार र घूसघोरीमा संलग्न भनेर पक्राउ परिरहेका छन् नि । कसरी हेर्नुभएको छ ?
केही घटना आउन सक्छन् । प्रहरी संगठनभित्र भ्रष्टाचार गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति पाएको छैन । हाम्रो तराई क्षेत्रमा खुल्ला नाका छ, राजस्व चुहावट धेरै हुने पनि त्यही हो । राजस्व चुहावट रोक्न प्रहरीको ५६ दशमलव ३४ प्रतिशत योगदान छ । केही छिटफुट त्यस्ता घटनामा हामीले कसैको संरक्षण गरेका छैनौं, कारबाही गरेका छौं । शुद्धीकरणका कामहरू गरिरहेका छौं । भ्रष्टाचार र घूसखोरीमा संलग्न कसैले पनि छुट पाउँदैनन् । अहिलेको प्रहरीको संलग्नता त्यसतर्फ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसमा समग्र प्रहरीकै नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छैन् । कोही व्यक्ति संलग्न भए होलान्, व्यवसायका रूपमा राम्रो डिल गर्न सकेनन् वा अनुत्तरदायी भए, त्यो पाटो कहीँ छ, तर प्रहरीलाई यसमा स्पष्ट सन्देश छ— प्रहरी महानिरीक्षकले छोडदैन् । हिजोदेखि नछोडेको कुरा अहिले झन् प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि छोडदैन् भन्नेमा सबै स्पष्ट छन् ।
बर्दियाको एक घटना र भक्तपुर इन्काउन्टरमाथि पनि प्रश्न त उठ्यो नि ?
अपराध न्युनीकरण र अपराधरहित समाज निर्माण गर्ने ध्येयका साथ गरिएका काम कारबाहीहरूमा मिडियाको पनि सहयोग छ । मूलत: समाजमा शान्ति–सुरक्षा कायम गरेर आर्थिक विकासतर्फ लम्कनु हामी सबैको लक्ष्य हो । कतिपय कुराको बुझाइमा भिन्नता हुन सक्छ, तर त्यसमा स्वार्थका कुरा पनि छन् । कहीं–कहीं गल्ती पनि भएका होलान्, तर आजको दिनमा सच्याउनुको विकल्प छैन । पुरानै ढाँचामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ । प्रविधिले समर्थन नगरेको अवस्थामा हामीले मानिसलाई ल्याएर कुुराकानी गर्ने हो, इन्ट्रोगेट गर्ने हो । शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने हो, सोधपुछ गरेपछि केही कुरा खुल्छ । अरु आधार के छ र ? हाम्रा बाध्यताहरू पनि छन् ।
प्रहरीभित्र सरुवा, बढुवामा आफ्नालाई काखा, राम्रालाई पाखा पारिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा म काममा विश्वास गर्छु । मैले एक सुका कसैलाई दिनु पनि परेन । कसैलाई आजसम्म सरुवा–बढुवामा यस्तो गर्देऊ, उस्तो गर्देऊ पनि भनिन् । म प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पनि त्यसरी नै भए । म कुनै पनि हालतमा यस्ता नचाहिने गलत अभ्यास हुन दिन्नँ । तपाईहरूले विश्वास गर्दा हुन्छ, म राम्रै गर्नका लागि भएको छु । प्रहरीले आफ्नो पेसागत दक्षता तथा क्षमतालाई निखारेर लानुपर्छ । जसले यी कुरालाई लिएर काम गर्छ, उसको स्टेनेबलिटी नै त्यही हो । केही समय पावरले होला, केही समय चाकडीले होला, तर ब्यवसायिक क्षमता वृद्धि गरेन र व्यवसायिक निष्ठामा बसेन भने कोही पनि यो संगठनको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्दैन । म जसरी भए, त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । काम गर्नेहरूलाई यो होइन भन्न सकिन्छ, यसले काम गर्न सक्दैन भन्न सकिन्छ ? आजकल त एकदमै पारदर्शी जमाना छ । राम्रो काम कसले गरेको छ, नराम्रो काम कसले गरेको छ, सबैले देखिरहेका छन् । हामी यसमा एकदमै पारदर्शी छौं, सुशासन कायम गर्ने कुरामा दृढ छौं । प्रहरी संगठनमा नि:स्वार्थ, विवेकपूर्ण ढंगले दृढताका साथ काम जो इमान्दार छ त्यसले मात्र गर्न सक्छ ।
प्रहरीलाई प्रहरी बनाउने भन्ने कुरामा दृढ हुनुहुन्छ ?
प्रहरी प्रहरीजस्तो हुनुपर्छ । सच्चा सज्जन मान्छे र समाज सबैलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, सबैलाई अगाडि राख्नुपर्छ । बदमास चरित्रका मानिसलाई प्रहरीको समीप आउन दिनु हँुदैन । कि कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्‍यो कि प्रहरी छाड्नुपर्‍यो । त्यो खालको प्रहरी हुनुपर्छ । प्रहरीले कारवाही गर्छ भन्ने सन्देश गएपछि कसैले पनि खराब क्रियाकलाप गर्न सक्दैनन् । प्रहरीले भनसुन, पैसा तथा पावरका आधारमा छाड्दैन भन्ने भएपछि अपराध गर्नेले पनि १० पटक सोच्छ । मेरा सबै प्रयास प्रहरीलाई प्रहरीजस्तो बनाउनेतर्फ केन्द्रित छन् ।
सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले के गर्दैछ ?
हामी देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउँदैछौं । १२ वटा थिमेटिक एरियाहरू लिएका छौं, त्यसका कोर्स कन्टेन्ट छन्, हामी स्कुल, कलेज, क्बल, नागरिक समाज, स्थानीय तहका सरकार, एनजिओआइएनजिओ तथा मिडिया सबैसंग साझेदारी गरेर अघि बढ्दैछौं । अरूले हामीलाई हेरून्, ठूला–ठूला बिल्डिङ मात्र विकासका सूचक होइनन्, सामाजिक संरचना पनि विकासको सूचक हो । दुई वर्षअघिका बलात्कार पीडितहरू पनि अहिले प्रहरीमा आइरहेका छन् । मानिसहरूमा न्याय पाइन्छ, अब लुकाउनु हुँदैन भन्ने चेतना पनि विकसित हुँदै गएको छ । अर्कातर्फ हामीले महिला सशक्तीकरण र आत्मसुरक्षाका क्लासहरू पनि अघि बढाइरहेका छौं ।
TagsNepal Police Sarbendra Khanal